5-ta codsi ee ugufiican ee lagu abuuro astaamo Android | Androidsis
5-ta codsi ee ugu wanaagsan ee lagu abuuro astaamo ku saabsan Android
Haaruun Rivas | | Codsiyada Android, Aaladaha Android
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee aan ku qaban karno nolosha waa abuurista ganacsi, summad ama ganacsi. Ganacsigu waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu kobciyo dhaqaale ahaan, sidaa darteedna, lagu guuleysto dhinacyada iyo aagagga kale. Oo haddii ujeeddadaadu tahay inaad abuurto wax soo saar, muuqaal ama adeeg, waa inaad ogaataa inay tahay inaad yeelato astaan ​​ama logotype si aad u siiso wakiilnimadeeda oo aad si fiican u gaadho dad badan, kuwaas oo noqon kara macaamiil macquul ah.
Taasi waa sababta aan kuugu keenayno boostadan, mid aan ku soo ururinno 5-ta codsi ee ugu fiican Android ee aad ku abuuri karto astaamo si fudud oo dhaqso ah, si aad u abuurto sawirka astaantaada, ganacsigaaga ama mid shaqsiyadeed oo kaa wakiil ah xirfadle kasta, isboorti, farshaxan iyo aag badan.
Barnaamijyada soo socda waxaad ka heli doontaa inaad abuurto astaamo waa lacag la’aan, waxaa xusid mudan. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah kuwan waxaa laga yaabaa inay leeyihiin nidaam lacag-bixin gudaha ah oo aad u baahan doonto inaad sameyso si aad u hesho adeegyo heer sare ah iyo kuwo horumarsan si aad uga faa'iideysato barnaamijka oo leh astaamo iyo qalab dheeri ah oo loogu talagalay naqshadeynta astaanta.
1 Abuur Logo Shirkad Xirfad Xirfadlahan Bilaash ah
2 Logo Kan sameeyey - App Logo Design Best
3 Logo Kan sameeyey - abuuraha astaan ​​iyo naqshadeeye
4 Logo Kan sameeyey - Logo Abuuraha, Generator & Naqshadeeye
5 Astaanta Calaamadda - Naqshadeynta Naqshadeynta Bilaashka ah & Astaamaha Astaanta
Abuur Logo Shirkad Xirfad Xirfadlahan Bilaash ah
Dukaanka Play-ka waxaad ka heli kartaa barnaamijyo iyo aalado badan oo lagu abuuro astaamo iyo astaamo, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu badan ee ka muuqda dhammaantood waa tan, waana sababta aan ugu horreysiineyno liiskan.
Codsigani aad buu u dhameystiran yahay naqshadeynta astaanta, maadaama uu ku faano hawlo badan iyo astaamo si loo muujiyo qabashada wax kasta oo aad rabto oo aad qiyaasi karto, oo leh ururinta tiro badan oo ah curyaaminta naqshadeynta garaafka xirfadeed, warbaahinta iyo shaqooyinka laxiriira qoraalka, qaababka, sawirrada iyo astaamaha muuqda. Waxaad ku haysataa wax kasta oo farahaaga ah oo ku jira codsigan si aad uga faa'iideysato hal-abuurnimadaada iyo hal-abuurnimadaada.
Waxaad kala dooran kartaa inta udhaxeysa 5000 sheybaaradeed oo horeyba u diyaarsan loona abuuray inaad isticmaasho, oo aad ku abuuri karto astaanta saxda ah ee sawirkaaga, wax soo saarkaaga, sumaddaada iyo / ama ganacsigaaga. Waxa kale oo jira astaamo tiro badan oo la heli karo oo lagu ciyaaro oo loogu talagalay qaabeynta. Intaa waxaa dheer, haddii aysan intaas ku filnayn, waxaa jira in ka badan 100 nooc oo font (typeface) ah iyo qaabab fara badan si loo siiyo 3D taabasho iyo in ka badan. Waxa kale oo jira buugga astaamaha, istiikarada, sawirrada la taaban karo, astaamaha iyo qaababka si astaantaadu u noqoto qaabka iyo qaabka ugu habboon.
Waxaad isticmaali kartaa sawiradaada adiguba sidoo kale waxaad kudaridoontaa saamaynta iyo miirayaasha, qaabab iyo qaabab. Dabcan, waxaad wax ka beddeli kartaa ficil ahaan wax kasta oo ku jira astaantaada sidaad u jeceshahayiyo waliba cabirka canaasiirta iyo inbadan. Waxa kale ayaa ah inaad ku sameyn karto astaamo qaabab wareegsan, ama qaab kasta oo aad rabto, iyo sooyaal hufan. Dhamaadka, waad keydin kartaa oo aad kala soo bixi kartaa naqshadeyntaada qaabka PNG ama JPEG oo qeexitaan sare leh, waxa ugu fiican ayaa ah inaysan la socon doonin wax calaamadeyn ah. Si loo ogeysiiyo, waxaad kula wadaagi kartaa Facebook iyo shabakadaha kale ee bulshada sidoo kale.
Haddii aad leedahay kanaal YouTube ah, bogga sumaddaada ama ganacsigaaga Facebook ee shabakad kasta oo bulsheed sida Instagram iyo Twitter, degel ama wixii kaleba, astaan ​​lagu abuuray qalabkan ayaa aad waxtar u leh in la siiyo wakiilnimada ganacsigaaga.
Developer: Makhrib App Muuqaal qurux badan
Logo Kan sameeyey - App Logo Design Best
Tartanka loogu talagalay barnaamijyada in lagu abuuro astaamo Google Play Store waa mid adag, mid kale oo ku soo biira tartankan inuu noqdo kan ugu fiican ayaa ah barnaamijkan, mid aad ku qaabeyn karto kuna abuuri karto astaan ​​kasta oo maskaxdaada ku jirta, iyadoo la siinayo waxyaabo kala duwan, shaqooyin iyo qalab ay ku siiso shaqadan oo kale. Kaliya waxaad ubaahan doontaa xoogaa hal-abuur iyo dabeecad, daqiiqado yar gudahood waxaad awoodi doontaa inaad yeelato astaanta riyadaada sawirkaaga, sumaddaada, ganacsigaaga, deegaankaaga, shabakaddaada bulshada iyo websaydhka.
Iyada oo xulashooyinka wax lagu beddelayo ee ay bixiso codsigan Android, Waad abuuri kartaa astaamo gebi ahaanba asalka ah bilaash. Waxa ugu fiican ayaa ah in kaliya aysan ku siineynin qalabka lagama maarmaanka u ah qaabeynta, laakiin sidoo kale waxay kaa caawineysaa geeddi-socodka; waxaa jira koronto-dhaliyeyaal loogu talagalay noocyada, hal-ku-dhigyada, calaamadaha, hal-ku-dhegyada iyo kuwo kale. Ma jirto wax cudurdaar ah oo aan bilaabin sameynta astaantaada maanta si fudud, dhaqso iyo fudud. Halkan waxaad ku haysaa fikrado kaa caawinaya inaad qaabeyso astaantaada astaanta u ah.
Uma baahnid inaad yeelato khibrad hore si aad ugu abuurto astaantaada barnaamijkan. Iska ilow daraasadaha iyo, si ka sii wanaagsan, lacag sii qof si uu kuugu qaabeeyo astaanta kuugu habboon.
Qaar ka mid ah howlaha ugu waaweyn iyo astaamaha aad ku heli doontid codsigan waa:
Habaynta fudud iyo dhammaystiran ee astaantaada, oo leh qoraallo iyo sooyaallo badan oo is dulsaaran si aad u qaadato qaabka aad rabto.
Waad beddeli kartaa cabbirka dhammaan walxaha astaamahaaga, oo ay ku jiraan xarfaha iyo astaanta.
Waxaad si fudud u badbaadin kartaa oo aad kala soo bixi kartaa astaanta, mar hadaad abuurtay oo aad dhameysay, in aad gallery. Waxaad sidoo kale ku keydin kartaa qabyo ahaan, wax ka beddelka mustaqbalka.
Buug-yaraha arjigan waxaa ka jira in ka badan 40 qaybood oo aad ka heli karto boqollaal fikrado ah oo ku saabsan qaabeynta astaantaada, oo leh qaybo ganacsi, biyo-biyoodyo, mood iyo qurxiyo, iyo kuwo kale oo badan.
In ka badan 7.000 oo arrimo ah oo loogu talagalay adeegsi bilaash ah iyo noocyo fara badan.
Developer: Barnaamijyada Arcade Apps
Logo Kan sameeyey - abuuraha astaan ​​iyo naqshadeeye
Barnaamijkan sameeyaha ah ee astaanta sameeya waxaa laga yaabaa inuusan caan u ahayn sidii labadii hore, laakiin waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu qiimeynta badan dukaanka Play Store. Waana iyada oo lagu qiimeeyo 4.6 xiddigood iyo in ka badan 1 milyan oo soo degsasho ah, waa mid ka mid ah kuwa ugu dhammaystiran uguna macquulsan ee qaabeynta astaamaha asalka ah ee bilaashka ah qaab fudud iyo daqiiqado yar gudahood. Dareenkan, waxaa kale oo xusid mudan inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu fudud, culeyskiisuna yahay 14 MB oo keliya. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay waxyaabo badan oo la bixiyo.
Si laga bilaabo, wuxuu leeyahay buug-yare (font) buugga loogu talagalay abuurista iyo habeynta astaanta aad rabto. Waxay sidoo kale leedahay ikhtiyaarro habeyn badan oo kala duwan oo ay ku jiraan xulashada iyo isbeddelka midabka, qaababka iyo, dabcan, asalka naqshadaha. Oo hadday waxaas oo dhammi ku filnayn, waxaad haysataa in ka badan 4.500 astaamo astaan ​​ah oo aad xulan karto oo aad u isticmaali karto si xorriyad leh oo fudud oo keliya adigoo ka dooranaya midka aad ugu jeceshahay buug-yaraha ballaadhan ee ay codsigan ku bixiso Android
Abuur sumcadda sumcaddaada, sawirkaaga iyo meheraddaada oo laga soo bilaabo astaamo leh astaan ​​cajaa'ib leh oo leh aaladaha uu kuu sameeyay Logo Kan sameeyey. Intaa waxaa dheer, sidoo kale waa ku habboon tahay abuurista iyo naqshadeynta xayeysiinta dhammaan noocyada sida dhiirrigelinta iyo dalabyada, boorarka iyo boodhadhka, joornaalada, sawirrada daboolka, buug-yaraha iyo waxyaabaha kale ee sumadda ee alaabadaada, adeegyada iyo shirkadda.
Waxaad kuheli doontaa waxyaabo badan oo gacanta kuugu ah habka tafatirka. Tan waxaa ku jira buug-gacmeed farshaxan oo aad u tiro badan oo istiikerro ah, qaabab, dusha sare, qaabab iyo sooyaal. Waxay sidoo kale bixisaa kaydinta astaanta kaarka microSD ee taleefanka (haddii aad mid leedahay) iyo ikhtiyaarka aad kula wadaagi karto curintaada shabakadaha bulshada sida Facebook.
Developer: KOOXDA TTT
Logo Kan sameeyey - Logo Abuuraha, Generator & Naqshadeeye
Haddii ikhtiyaarradii hore ee aan ku tusnay intii lagu jiray ururinta barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu abuurayo laguna saxaayo astaamaha Android aysan ku qancin, barnaamijkan ayaa laga yaabaa.
Haddii aad raadineyso inaad yeelato 100% asalka iyo monogram ama astaan ​​bilaash ah, Logo Maker - Logo Abuuraha, Generator & Naqshadeeyayaasha ayaa amarkaaga dhigaya aalado badan oo tafatir ah si aad u sameyso waxaad u maleysid oo aad run u rabto. Abuur oo qaabee aqoonsiga dukaankaaga, ganacsigaaga, sawirkaaga, sheygaaga, adeeggaaga iyo sumaddaada barnaamijkan si dhakhso leh oo fudud, maadaama ay leedahay isku xirnaan sahlan oo fudud.
Wuxuu la yimaadaa koronto-dhaliye astaamo, calaamado, hal-ku-dhigyo iyo waxyaabo kale oo badanMarkaa haddii aadan haysan fikrado kugu filan oo aad ku abuurto naqshadeyntaada, waa inaadan ka walwalin. Abkaani ficil ahaan adiga ayuu kuu shaqeeyaa Dabcan, waa inaad lahaataa xoogaa hal-abuur iyo hal-abuurnimo ah si aad u siiso taabashada ugu dambeysa sawirkaaga astaanta, in kasta oo aad adigu wax walba ka sameyn karto xoqashadaada adigu. Waxaa jira ikhtiyaarro habayn kala duwan oo kala duwan sida asalka, farta, is dulsaarka iyo walxaha farshaxanka ee aad hubaal jeclaan doontid.
Astaanta Calaamadda - Abuur Logo, Generator & App graphic
Astaanta Calaamadda - Naqshadeynta Naqshadeynta Bilaashka ah & Astaamaha Astaanta
Si loo dhammeeyo liistadan 5-ta codsi ee ugu fiican iyo qalabka loogu talagalay abuurista iyo qaabeynta astaamaha loogu talagalay Android, waxaan haynaa barnaamijkan, mid kale oo lagu soocay Google Play Store inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan uguna horumarsan qaabeynta astaamaha, oo leh heer sare oo aad u wanaagsan qiimeynta xiddigaha 4.7 ee dukaanka, in ka badan 5 milyan oo soo degsasho ah iyo in ka badan 100 oo faallooyin togan ah, mana ahan wax yar, waxaa habboon in la sheego.
Qalabkani wuxuu bixiyaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u abuurto astaanta riyadaada, ta aad ku matali doonto sawirkaaga, sumaddaada iyo ganacsigaaga. Waxaad haysataa waxyaabo badan oo aad udgoon karto hal-abuurkaaga. Waxaad haysaa arrimo badan, xubno farshaxan, qaabab, noocyo iyo waxyaabo kale oo badan. Waxaad sidoo kale leedahay istiikirro badan oo aad u isticmaali karto si aad ugu siiso taabashadaas shaqsiyeed ee aadan tabi karin. Abuur astaantaada daqiiqado gudahood lana wadaag asxaabtaada adoo adeegsanaya shabakadaha bulshada.
Logo Maker: Naqshadeynta Garaafyada iyo Tilmaamaha Logo
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 5-ta codsi ee ugu wanaagsan ee lagu abuuro astaamo ku saabsan Android
Maxaa la sameeyaa haddii taleefankaaga gacanta uusan aqoonsan kaarka SIM-ga, dhammaan xalalka